စိတ်ကြိုက်လုပ် modular အိမ်များ
အနီရောင်မော်တော်ကားပြပွဲ Modifie ကွန်တိန်နာအတိုချုပ်ဖော်ပြချက်တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်. စက်မှုအသွင်အပြင်. ဒါကရေကြောင်းကွန်တိန်နာပါပဲ. ၎င်းသည်စံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားများစွာရှိသည်. ဘုံအရွယ်အစားမှာ 20GP နှင့် 40HQ ဖြစ်သည်. 20မိသားစုဆရာဝန်- 6.096*2.438*2.589မီတာ 40HQ- 12.192*2.438*2.896မီတာလျင်မြန်စွာအသေးစိတ်ပစ္စည်းအမည်အနီရောင်မော်တော်ယာဉ်ပြပွဲခန်းမပြုပြင်ထားသောတစ်ပတ်ရစ်ရေကြောင်းကွန်တိန်နာကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပြုပြင်မွမ်းမံ…
ပြုပြင်ထားသော 20ft Shipping Container Warehouse အတိုချုပ်ဖော်ပြရန်မလိုအပ်ပါ။ အသေးစိတ်ဖော်ပြရန်မလိုအပ်ပါ. စက်မှုအသွင်အပြင်. ဒါကရေကြောင်းကွန်တိန်နာပါပဲ. ၎င်းသည်စံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားများစွာရှိသည်. ဘုံအရွယ်အစားမှာ 20GP နှင့် 40HQ ဖြစ်သည်. 20မိသားစုဆရာဝန်- 6.096*2.438*2.589မီတာ 40HQ- 12.192*2.438*2.896မီတာလျင်မြန်စွာအသေးစိတ်ပစ္စည်းအမည်ပြုပြင်မွမ်းမံ 20ft ရေကြောင်းကွန်တိန်နာဂိုဒေါင်မလိုအပ် ...
Fashion Platform ပါ ၀ င်သည့် Fashion Green Shipping Container ရုံးခန်းဖော်ပြချက်တို။ တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ. စက်မှုအသွင်အပြင်. ဒါကရေကြောင်းကွန်တိန်နာပါပဲ. ၎င်းသည်စံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားများစွာရှိသည်. ဘုံအရွယ်အစားမှာ 20GP နှင့် 40HQ ဖြစ်သည်. 20မိသားစုဆရာဝန်- 6.096*2.438*2.589မီတာ 40HQ- 12.192*2.438*2.896မီတာလျင်မြန်စွာအသေးစိတ်ပစ္စည်းအမည်ဖက်ရှင်အစိမ်းရောင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်တိန်နာပလက်ဖောင်းနှင့်အတူကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်…
20ပေ ၄၀ ပေအသစ်သောရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကွန်တိန်နာဘတ်စကက်ဘောတရားရုံးရုံးအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်တပ်ဆင်ရန်မလိုပါ. စက်မှုအသွင်အပြင်. ဒါကရေကြောင်းကွန်တိန်နာပါပဲ. ၎င်းသည်စံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားများစွာရှိသည်. ဘုံအရွယ်အစားမှာ 20GP နှင့် 40HQ ဖြစ်သည်. 20မိသားစုဆရာဝန်- 6.096*2.438*2.589မီတာ 40HQ- 12.192*2.438*2.896မီတာလျင်မြန်စွာအသေးစိတ်ပစ္စည်းအမည် 20ft နှင့် 40ft အမှတ်တံဆိပ်ရေကြောင်းအသစ်…
40ပေပြုပြင်ထားသောတစ်ကိုယ်ရေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်တိန်နာသာယာလှပသောareaရိယာတည်းခိုခန်းအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ. စက်မှုအသွင်အပြင်. ဒါကရေကြောင်းကွန်တိန်နာပါပဲ. ၎င်းသည်စံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားများစွာရှိသည်. ဘုံအရွယ်အစားမှာ 20GP နှင့် 40HQ ဖြစ်သည်. 20မိသားစုဆရာဝန်- 6.096*2.438*2.589မီတာ 40HQ- 12.192*2.438*2.896မီတာလျင်မြန်စွာအသေးစိတ်ပစ္စည်းအမည် 40ft ပြုပြင်ထားသောတစ်ပတ်ရစ်ရေကြောင်းကွန်တိန်နာသာယာလှပareaရိယာ Lounge ...
တစ်ပတ်ရစ်ပြုပြင်ထားသောရေကြောင်းကွန်တိန်နာ Exhibition Hall
တစ်ပတ်ရစ်ပြုပြင်ထားသောရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကွန်တိန်နာ Exhibition Hall Container အဆောက်အအုံကိုကမ္ဘာတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့သည်, အထူးသဖြင့်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံများတွင်, စီးပွားရေးနှင့်အလယ်အလတ်ဒေါသဟိုတယ်များ, ကျောင်းသားတိုက်ခန်း, လူနေတိုက်ခန်းများ, အားလပ်ရက်တိုက်ခန်းများနှင့်အခြားအဆောက်အ ဦး များ. ကွန်တိန်နာအဆောက်အ ဦး နေရာအနှံ့ဖြစ်ပါတယ်. ၎င်း၏မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်အတူ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများ,…